Sidee loo Kobciyaa Caqliga? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Sidee loo Kobciyaa Caqliga?
Miski Cabdinuur Salal — February 23, 2020
Qof waliba oo ku nool duniddaan waxaa uu jecel yahay in uu noqdo qof caqli badan.
Shaqooyinka muhiimka ah ee caqliga uu noo qabto waxaa kamid ah: Xasuusta mida gaaban iyo mida dheer, Xalinta caqabadaha nolosha, Qiimeynta qofka, Garashada shaqsiga ah, Qorsheynta mustaqbalka, Fahamka waxbarashda iyo Go’aan wanaagga.
Caqliga badnaanta waa deeq Alle bixiyo, sidoo kale waxa ay kamid tahay wax-yallaha dadaalka lagu gaari karo. Soomaalida waxa ay ku maahmaahdaa:
“ Caqligaada oo yar aamus baa lagu kaashadaa”.
Caqliga wax-yaallaha kordhiyo waxaaa kamid:
Nuujinta Naaska waxa uu qeyb lixaad leh ka qaataa kobac caqliga caruurta.
• Barashada wax cusub, waxa ay xoojisaa shaqadda maskaxda waxayna kobcisaa caqliga.
• Aqrinta waxa ay kobcisaa caqliga, waxaa wanaagsan qof waliba in uu si joogta ah wax u aqriyo.
• Jimicsiga jirka caafimaad ayuu u yahay, kobac caqligana waa uu ka qeyb qaataaa.
• Cunnista cuno dheelitiran waxa ay ka qeyb qadaataa kordhinta iyo kobcinta caqliga.
• Dhagaysiga wax-yaallaha wanaagsan waxa ay kobciyaan caqliga.
• Barashada luuqada cusub.
• Seexashada habeenki 7-8 saacadood waxa ay ka qeyb qaaddata koritaanka caqliga.
• Maareynta walwalka, waxa ay ka qeyb qaadaataa kobcint caqliga, sababtoo ah walwalka badan waxa uu wax-yeellayaa xasuusta. Sidoo kale
• Hadaf dhigashada waxa ay ka qeyb qaaddataa kobac caqliga.
Tags: Sidee Ayaa loo Kobciyaa Caqliga?
Next post Xanjada iyo Waddanka Singabuur!
Previous post Muhiimada Ay Uleedahay Bini'aadanka Innuu Helo Cunto Wanaagsan iyo Ammaan uu Ku Noolaado?